Indlu yeendwendwe eCozy&Ngoxolo I, 1B@Rimtalay Angsila - I-Airbnb
Indlu yeendwendwe eCozy&Ngoxolo I, 1B@Rimtalay Angsila
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uDilaka ..(Nink) iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Enye iyunithi enye ukusuka ezimbini zeRimtalay Angsila Guesthouse, ebekwe kwindawo evalelwe abantu basekhaya, kude nolunye uluntu kodwa iyakwazi ukuya kwiindawo ezinomtsalane okanye iindawo ezinomdla ngokulula kwimizuzu embalwa.
Kukho isitudiyo esbini esahlukileyo esinombono wegadi endlwini, ebonelela ngamagumbi abanzi kunye nethafa elibanzi, zonke zixhotyiswe ngezixhobo zanamhlanje ezikumgangatho ophezulu. Kwisithuba seemitha ezingama-50 uya kufumana indawo yokuqubha yelali kunye nebala lokudlala.
Uluntu lujikeleze isiqingatha sehlathi le-mangrove apho kukho iintlobo ezahlukeneyo zeentaka ezitya iintlanzi, iimpungutye ezibhabhayo.
Ukuhamba ngekayaking ngexesha lokutshona kwelanga kumnandi ngokwenene.
Ikhaya lethu likumgama weemitha ezingama-20 kuphela ukusuka kwiNdlu yeeNdwendwe.
Ndiyakuthanda ukulima nokucheba igadi ngokwam ngoko uza kundibona phantse yonke imihla. Ndikulungele ukukunceda ube nexesha elimnandi kwiholide yakho.
Kuba ndibeke ikhalenda yesicelo somgama phakathi kweenyanga ezi-3, nceda ujonge indawo yethu kwakhona xa ikhalenda ihlaziywa.
Ndiyakuthanda ukulima nokucheba igadi ngokwam ngoko uza kundibona phantse yonke imihla. Ndikul…